Vaovao - Iza no diamondra lafo indrindra eto an-tany? Topazo maso ireo harena namorona ny tantaran'ny lavanty
Iza no diamondra lafo indrindra eto an-tany? Topazo maso ireo harena namorona ny tantaran'ny lavanty
Inona ny diamondra lafo indrindra eto an-tany? Rehefa tsy azo atao ny mamaritra ny sandany, angamba azontsika jerena ny vidin'ny peratra diamondra amin'ny alàlan'ny diamondra lafo indrindra sy lafo indrindra amin'ny tantaran'ny lavanty. Ireo dia namorona peratra diamondra manan-tantara tamin'ny tantaran'ny lavanty. Kanto sy mamo ny fo!
Ireo diamondra dimy lafo indrindra amin'ny tantaran'ny trano lavanty
Ity peratra diamondra mavo Graff ity, milanja 100,09 karat, dia tsy afaka nakatona tamin'ny voalohany noho ny tolotra ambany. Taty aoriana, niaraka tamin'ny trano fivarotan'i Sotheby izay nanambara ny hamoahana indray ny diamondra, ny hetsika lehibe indrindra dia ny vidiny farany $ 16,3 tapitrisa tamin'ny Mey 2014. Ny fifanarahana, araka ny voalazan'i Sotheby's, dia nanambara fa ny vidiny dia efa nanimba ny firaketana an'izao tontolo izao teo amin'ny 14 tapitrisa dolara amerikana, ary mino ny trano varotra fa "tsara" ny vidiny, aorian'io, ny tombana amin'ny vidin'ny diamondra ao anatin'ny 15-20-25 tapitrisa dolara amerikana eo anelanelany.
Ny lohataona 2017 dia notanterahina ny harivan'ny faha-4 tao amin'ny Foibe Fampirantiana sy fampirantiana Hong Kong. Ny "Star Pink" nandrasana fatratra - milanja 59,60 karatra diamondra mavokely tsy misy kilema ary manodidina ny 553 tapitrisa dolara Hong Kong (naoty an'ny mpanoratra: 490 tapitrisa RMB renminbi fifanakalozana, izay nametraka firaketana vaovao momba ny lavanty diamondra ao amin'ny izao tontolo izao.
Nivarotra varotra diamondra 14,62 karat an'i Christie tamin'ny $ 57.6 tapitrisa tany Geneva, Suisse. Ilay diamondra manga mamirapiratra izay nalain'ny mpividy tsy fantatra anarana dia nantsoina hoe Oppenheimer Blue. Ny vidiny talohan'ny lavanty dia tombanana ho 3800. ~ 45 tapitrisa dolara amerikana, no vatosoa lehibe indrindra amin'ity sokajy ity nandray anjara tamin'ny lavanty.
Tamin'ny 12 Novambra 2013, ny diamondra volomboasary lehibe indrindra eran-tany dia amidy tamin'ny $ 31.59 tapitrisa US, nametraka firaketana ny vidin'ny lavanty diamondra mitovy amin'izany. Ity diamondra voasary ity dia nomen'ny American Gemological Institute ho mari-pahaizana ambony indrindra ary ny lokony dia voasary madio. Ity karazana diamondra ity dia antsoina koa hoe "diamondra afo" ary mahalana izy no miseho amin'ny lavanty. Azo lazaina fa ity diamondra volomboasary ity dia fantatra Ny lehibe indrindra amin'ny karazany karazany.
Tamin'ny volana oktobra 2013, ny diamondra fotsy somary lavalava fotsy mena, milanja karatra 118,28, dia namidy tamin'ny $ 30.6 tapitrisa (HK $ 212 tapitrisa) tao amin'ny "Varotra firavaka mahafinaritra sy fivarotana firavaka vita amin'ny Jade". Azo lazaina fa namorona ny firaketana ny lavanty ho an'ny tontolon'ny diamondra fotsy ity, ary io dia nanjary iray amin'ireo diamondra lafo indrindra sy mavesatra indrindra tamin'ny tantaran'ny lavanty. Ity diamondra fotsy 118 karat ity dia namboarina tamin'ny fitaovana manta diamondra 299 nanjono tany Afrika Atsimo tamin'ny 2011. Voalaza fa ny mpividy an'io diamondra io dia manana ny zony hanome anarana ihany koa.
Varotra mihaja sivy amin'ny tantaran'ny firavaka
Rojo Maharani any Baroda, India
Fotoanan'ny varotra: 1974
Tsy mihoampampana ny filazana fa io no zavaboary niavaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny firavaka. Emeralda Kolombiana miisa telo ambin'ny folo manana karat 154 milanja totalin'ny karàna mihantona eo afovoan'ny diamondra miendrika lotus, ary vita amin'ny emeraoda sy diamondra am-polony. . Ny tena mahagaga dia nalaina avy tamin'ny satroboninahitry ny Grand Duke of Vadodda ireo vatosoa ireo. Maharani avy any Baroda, fantatra amin'ny anarana hoe Duchess of Windsor any India, dia maniry fatratra firavaka. Tsy misy afa-tsy sekely roan-jato amin'ny firavaka manokana. Ny sasany amin'izy ireo dia efa nanomboka tamin'ny vanim-potoana Mughal ihany.
Ny bokin'ny The Duchess of Windsor
Fotoana varotra: 1987
Van Cleef & Arpels, raha natao ho an'ny Lady of Virgo any Varonda, India, dia niara-niasa tamin'i Cartier ihany koa hanamboatra firavaka firavaka ho an'ny Duchess of Windsor. Izy io koa dia fantatra amin'ny fanangonana firavaka sarobidy indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Taorian'ny fahafatesan'ny Duchess of Windsor, dia lavanty maherin'ny 50 tapitrisa dolara ny fanangonana azy. Tamin'ny 1940 Cartier dia nandravaka ny firavaka mena sy manga ary maitso ary citrine ary diamondra ho an'ity brooch flamingo mahafinaritra ity. Ny mpanjaka Edward VIII dia nanome tamim-pahalalahan-tanana an'io vehivavy malalany io. Na dia nanantena ny hanala ilay brooch taorian'ny fahafatesan'ny Duchess aza izy dia tsy nanizingizina ny faharetany. Ary nitombo ny sandan'ny brooch, ary avo 7 heny noho ny 7 tapitrisa dolara amerikana andrasana!
Rojo ny zanakavavin'i Salimah Aga Khan
Fotoanan'ny varotra: 2004
Tsy ny firavaka an'ny Duchess of Windsor ihany no auctions amin'ny varotra avo lenta. Rehefa lasa andriambavy i Sally CroCKer-Poole tamin'ny 1969, dia nanangona firavaka miravaka maro be izy. Ary varotra varotra ireo firavaka ireo taorian'ny nisarahany tamin'ny 1995. Anisan'izany ny rojo nataon'i Boucheron, rojo andiany Van Cleef & Eble ary diamondra manga miendrika fo, izay amidy amin'ny vidiny lafo indrindra, izay mampidina ny vidin'ny Duchess of Windsor's. lavanty firavaka.
Rojo Maria Callas
Maria Callas, malaza amin'ny "Andriamatoa", dia mpihira opera maharesy lahatra. Ny toetrany matanjaka sy ny tantaram-pitiavany mampalahelo no ifantohan'ny diniky ny olona hatrany. Izy no andriamanibavy tena izy, manao perla sy diamondra foana, na aiza na aiza alehany hisarika ny sain'ny olona. Ny fanangonana firavaka sarobidy indrindra an'i Maria Callas dia misy bros de diamondra mavokely novidiana tamin'ny 1967, izay natao lavanty tamin'ny Novambra 2004 taorian'ny nahafatesany taona maro lasa izay. Nahatratra 1,86 tapitrisa dolara amerikana ny vidin'ny firavaka natao lavanty rehetra.
The Princess Margaret Crown
Fotoanan'ny varotra: 2006
Ny varotra firavaka an'ny Printsy Margaret dia tsy hohadinoina velively, indrindra rehefa afaka zato taona aorian'ny nanaovana varotra ny firavaka an'ny Mpanjakavavy Victoria tamin'ny taona 1901. Mazava ho azy, ny fanangonana mpanjaka 800 an'ny Princess Margaret tamin'ny 2006 dia nahita ihany koa ny tsena. Princess Margaret dia kanto sy manintona foana talohan'ny nahafatesany, firavaka maro be no nirongatra mba hanana tombontsoa hiditra amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. Anisan'izany ny lovan'i Faberge sy ny Mpanjakavavy Mary, ary ny satro-boninahitra Poltimore nitafy tamin'ny fampakaram-bady tamin'ny 1960, dia teraka tamin'ny 1870 izy io, zato taona lasa izay.
Peratra diamondra an'i Elizabeth Taylor
Fotoanan'ny varotra: 2011
Tsy misy lavanty firavaka mifanentana amin'ny haitraitra ananan'i Elizabeth Taylor. Natao lavanty ireo fanangonana firavaka nataony rehefa nitety an'izao tontolo izao nandritra ny iray volana. Raha heverintsika fa ny fivarotana 50 tapitrisa dolara amerikana teo aloha dia efa nahafinaritra ny nitifitra tanana ratsy, dia aza fantatrao izay hampiasana hilazana 137,2 tapitrisa dolara amerikana! Ny firavaka lavanty dia misy ny mpilalao sarimihetsika Richard Burton tamin'ny 1968 (nomen'i Richard Burton ny peratra diamondra misy azy, dia totalin'ny karama 33.19. Ary ampahany kely fotsiny io, ary koa rojo voahangy Ruby Peregrina voahangy, satro-boninahitra The Mike Todd, rojo diamondra Taj , ary rojo emeraoda mena Bulgaria iray hafa nomen'i Richard Burton.
Bokin'i Lily Safra
Fotoana varotra: 2012
Raha ny marina dia nisy ny varotra firavaka nataon'i Lily Safra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny firavaka varotra nataony dia nahitana broos de ruby ​​sy diamondra nataon'i JAR Paris, milanja 173,09 karat eo ho eo. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fizotran'ny varotra dia ny fanomezana rehetra ho an'ny fiantrana, satria i Lily Safra dia tsy olona malaza ihany fa sady tia manome. Taorinan'ny fanambadiana efatra, 1,2 tapitrisa dolara ny vola lanin'ny firavaka nataony, izay nahatonga azy ho iray amin'ireo olona manankarena indrindra teto an-tany.
Kavina nataon'i Gina Lollobrigida
Fotoana varotra: 2013
Gina Lollobrigida dia tsy mpilalao sarimihetsika italiana fotsiny. Mpanao gazety sy mpanao sokitra koa izy. Izy koa no mpilalao eropeana malaza indrindra tamin'ny taona 1950 sy 1960. Tamin'izany fotoana izany dia famantarana mahaliana fotsiny izy. Tamin'ny volana mey 2013 dia natao lavanty ny fanangonany firavaka ary nahatonga fahatsapana izany, indrindra ho an'ny kavina kavina Pierre Boucherin Diamond Emerald izay novokarina tamin'ny 1964.
Ny bracelet an'i Hélène Rochas
2013 tokoa no fe-potoana faratampon'ny varotra firavaka, ary iray amin'ireo miavaka indrindra ny fanangonana firavaka an'i Rosa, ao anatin'izany ny fehin-tànana volamena rehetra an'i Nid d'Abeille René Boivin misy mena, safira ary diamondra. Amin'ny lafiny iray, nanenjana ny elanelana misy eo amin'ny mpanangona sy ny fiarahamonina avo any Paris koa izy ary niaina traikefa kely.
Fotoana fandefasana: Sep-20-2018